American Idol season 16 မှာ ဒိုင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Katy Perry တစ်ယောက်ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။ စကတည်းကယဉ်သကိုဆိုသလိုပဲ ပွဲအစမှာကတည်းက ပြိုင်ပွဲဝင်ကောင်လေးကို kiss ပေးခဲ့လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့တာမှမကြာသေး ခုလဲ season finale မှာ မထော်မနန်းတွေလုပ်လို့ စင်ပေါ်ကနေ ဆွဲချခံရပြန်ပါပြီ။
Katy Perry ဟာ American Idol season finale အတွက် ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ အထူးဧည့်သည်တော် Becca Kufrin စကားပြောနေတဲ့နားကိုသွားပြီး ဒူးထောက်ထိုင်လက်အုပ်ချီပြီး အလစ်ကိုချောင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့အခွင့်အရေးရတာနဲ့ Becca Kufrin ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး ဆယ်စက္ကန့်လောက်ကြာအောင် နမ်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့
“ကိုယ်ကအခုချိန်မှာ single တစ်ယောက်မဟုတ်တော့ပေမယ့် မင့်ကို ကြိုက်နေမိတုန်းပဲ”
ဆိုပြီး တော့လဲပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ (ဘာသဘောလားနော် ?)
Katy Perry ကအဲ့လိုတွေပြောပြီး အဲ့လိုတွေလုပ်နေတော့ Becca Kufrin ခမျာ ဆွံ့အသွားရှာပါတယ်။ အဲ့တာကို မချောကမပြီးနိုင်မစီးနိုင် လက်ကို အဆက်မပြတ်နမ်းတော့တာပါပဲ။ အဲ့တာနဲ့ သူ့အကြောင်းတွေသိနေပြီဖြစ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဒိုင်ဖြစ်သူ Luke Bryne က လာပြီး ဆွဲခေါ်ယူရပါတော့တယ်။(Katy ကိုယ်တိုင်ကလဲ သူ့ကိုဆွဲပါဆိုပြီးတော့ Luke Bryne ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။) စင်နောက်ဖက်ကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတာတောင် မထနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ Katy Perry အတွက် နောက်ထပ်ဒိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lionel Ritchie ကတော့ အဲ့ဒီအပြုအမူတွေအတွက် Becca Kufrin ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
Katy Perry ရဲ့ အပြုအမူပေါ်မှာ သူမဟာ စိတ်လွတ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်တို့၊ ပေါလွန်းတယ်တို့ ဆေးလိုနေတာလား ဆေးလွန်နေတာလား ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးဝေဖန်နေကြပေမယ့် Katy Perry ဖက်ကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှပြန်မပြောသေးပါဘူး။ အောက်က video ထဲမှာ Katy တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေတောင်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြပါနော်။ အက်မင်ဆို သဘောတွေကျလွန်းလို့ ခဏခဏပြန်ကြည့်မိပါတယ်။
The Bachelorette ရဲ့ twitter မှာတော့ Katy Perry တစ်ယောက် Becca Kufrin ကို propose လုပ်လိုက်တာလားဟ?? Idol finale မှာ ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်…. ဆိုပြီး tweet တစ်ခုတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အင်း… သူတို့ပြောပုံအရဆိုရင် Becca Kufrin ရဲ့ရည်းစားကတော့ ပြိုင်ဖက်အသစ်ရသွားတယ်လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့နော်…..
PREVIOUS POST Previous post: Avicii ရဲ့ funeral အစီအစဉ်ကို မိသားစုဝင်များထုတ်ဖော်ပြောကြား
NEXT POST Next post: တစ်နေ့တစ်ခြား အောင်မြင်ကျော်ကြားလာတဲ့ Kpop Idol အဖွဲ့များအကြောင်းတစေ့တစောင်း